bilowga safarka kala tagga Ilhan iyo Axmed Xirsi – GEELLE MAG
Home » Faallooyin Wararka
Cali Axmed Posted On October 9, 2019
Warbaahinta Mareykanka iyo weliba kuwa Ingiriiska ayaa waxa ay si aad ah uga faaloonayaan warbixin ay uga hadlayaan kala taga Ilhaan Cumar iyo Seygeeda Axmed Xirsi iyo weliba qaabka ay ku kala tageen oo maalmahan ay aad uga warbixinayaan.
Ilhaan Cumar iyo Seygeeda Axmed Xirsi ayaa la sheegay in ay ku kala tageen khilaafaad culus oo soo food saaray, kaasi oo salka ku haaya markii ay Ilhaan Cumar taageertay sida la sheegay in ay dadka isku jinsiga ah ay is guursan karaan, taasi oo la sheegay in khilaaf baahsan ay ka abuurtay xiriirkooda.
Wargeyska the Daily Mail ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in ay kala tageen Ilhaan Cumar iyo Seygeeda Axmed Xirsi, oo uu sheegay in ay hadda ku kala nool yihiin laba meel oo kala duwan.
Wargeyska the Daily Mail ee dalka Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in Ilhaan Cumar iyo Seygeeda Axmed Xirsi ay kala guureen, isla markaana ay ku guda jiraan hanaankii isku furi lahaayeen.
Sidoo kale Wargeyska the Daily Mail ayaa warbixin gaar ah uu qoray waxa uu ku sheegay in Ilhaan Cumar ay ceyrisay seygeeda Axmed Xirsi.
Ilhaan Cumar iyo Seygeeda Axmed Xirsi markii ugu horeysay oo ay is guursadeenna waxa ay aheyd sanadkii 2002-dii, balse waxa ay kala tageen sanadkii 2008-dii, ka hor inta aynaan mar kale dib iskugu soo noqonin.
Ilhaan Cumar iyo seygeeda Axmed Xirsi ayaa waxa ay dib isugu soo laabteen si sharci ah sanadkii 2018-kii, waxa ayna isku hayaan sedex caruur ah.
Wargeyska the Daily Mail ayaa sidoo kale sheegay in Ilhaan Cumar ay hadda ka guurtay halka ay iskula noolaan jireen seygeeda Axmed Xirsi, una guurtay dhismo qaali ah oo ku yaalla Mail street oo ah xaafad ka tirsan Minneapolis.
“Waan ka xumahay, waxba kama oran karo arrintaasi” ayuu u sheegay Axmed Xirsi wareysi uu la yeeshay Wargeyska the Daily Mail ee kasoo baxa dalka Ingiriiska.
Sidoo kale Ilhaan Cumar ayaanan ka jawaabin sida uu sheegay wargeysku xiriir uu la sameeyay.
Axmed Xirsi ayaa hadda keligiisa ku nool gurigii ay ku wada noolaayeen asiga iyo afadiisii Ilhaan Cumar, hase yeeshee waxa uu sheegay in Ilhaan Cumar ay hadda ku nooshahay guri aad qaali u ah oo ku yaalla Minneapolis.
Axmed Xirsi ayaan sidoo kale xaaskiisa kusoo dhoweyn garoonka diyaaradaha ee Minneapolis, kadib markii ay todobaadkii tegay kasoo laabatay Magaalada Washington DC.
Ilhaan Cumar ayaa waxa ay wajaheysaa khilaaf xoogan oo kasoo food saartay dhinaca Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo weliba qaar ka mid ah taageerayaashiisa.
Waxaa sidoo kale la sheegay in ammaanka Ilhaan Cumar uu aad khatar ugu jiro, iyadoo taageerayaasheeda ay ku dhiirageliyaan in ay iska ilaaliso meelaha qaar ay tageyso, isla markaana ay si gaar ah uga taxadarto ammaankeeda.
Khilaafkan xoogan oo soo food saartay Ilhaan Cumar iyo Seygeeda Axmed Xirsi ayaa waxa uu yimid kadib markii ay Ilhaan Cumar ay ku dhawaaqday sidoo kalena ay taageero buuxda siisay in ay is guursan karaan dadka isku jinsiga ah.
Si kastoo ay ahaataba, sheekada kala taga Ilhaan Cumar iyo seygeeda Axmed Xirsi ayaa waxa ay noqotay mid aad looga hadal haayo wargeysyada caalaamka oo dhan.
Ilhaan Cumar iyo Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa ka dhex abuurmay khilaafkii ugu adkaa ee soo food saarta.
Dhawaan ayaa waxaa xaaskii Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Michael Obama ay ka jawaabtay culeyska uu Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ku haayo Ilhaan Cumar.
Waxa ay sheegtay in aysan aheyn mid loo dulqaadan karo, isla markaan dalka Mareykanka uu yahay wadan la wada leeyahay.
Ugu dambeyntii waxa ay sheegtay xaaska Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Michael Obama in ay tahay in uu tallaabo haboon uu dib uga laabanayo go’aanadiisa uu cadaadiska ku saaraayo dadka soo galootiga ah, sidoo kale uu u isticmaalayo dadka soo galootiga ah sidii in aysan waxba ku laheyn dalka Mareykanka.
Kalabaydhka Puntland maxa sababay? Madaxtooyada mise Golaha.
Editor October 27, 2019
Madaxweynaha Puntland oo Magacaabay Agaasimayaal
Cali Axmed October 22, 2019
SAWIRO:-Madaxweynaha Soomaaliya oo Casho Sharaf u sameeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti